के तपाईलाई थाहा छ, पुरुषले महिलाहरुलाई कसरी आकर्षित गर्छन ? - नेपालबहस
के तपाईलाई थाहा छ, पुरुषले महिलाहरुलाई कसरी आकर्षित गर्छन ?
| १७:०८:४२ मा प्रकाशित
पछिल्लो समयमा महिला पुरुष प्रति र पुरुष महिलाप्रति आकर्षित हुन कुनै नयाँ कुरा हैन । अहिलेको आधुनिक समयमा जो कोही व्यक्ति पनि प्रेम गर्ने गर्दछन् । के तपाईहरुलाई थाहा छ ? महिलाले पुरुषको कुन अंग बढी मन पराउछन, कुन अंगले सबै भन्दा बढी र सबै भन्दा पहिले आकर्षित हुन्छन् ।
एक युनिभर्सिटी अफ ब्रिटिस कोल्मबियाले गरेको अध्ययन अनुसार पुरुषको आँखाले महिलाहरुलाई सबै भन्दा बढी आकर्षित गर्दछ ।
साथै यी अध्ययनसँगै ब्रिटेन र साउथ अफ्रिकाको तीन यूनिभर्सिटीजको अध्धयनबाट पनि यो कुरा पुष्टि गरेको छ ।
आँखा– पुरुषको आँखाले महिलाहरुलाई सबैभन्दा बढी आकर्षित गर्दछ ।
ओठ दाँत- गुलाबी ओठ र मुस्कानमा टल्लक टल्कने दाँतले पनि महिलाहरुलाई सहजै रुपमा आकर्षित गर्दछ ।
छाती र काँध– मस्कुलर शरीर, बलियो शरीर, चौडा काँध र छातीले पनि महिलाहरु छिट्टै आकर्षित हुन्छन् ।
छाला- स्वस्थ- सफा र चम्किलो छाला प्रति पनि महिलाहरु आकर्षित हुन्छन् । तसर्थ पुरुषले यस तर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्द्ध ।
जुँघा र दाह्री- बाक्लो जुँघा र दाह्री प्रति पनि आकर्षित हुन्छन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता आब्हान ६ मिनेट पहिले
पूर्व सभापति न्यौपानेको निधनमा डा.शेखरद्वारा दुःख व्यक्त ६ मिनेट पहिले
आज बिहानैदेखि भीमफेदी–कुलेखानी सडकखण्ड अवरुद्ध ८ मिनेट पहिले
पातारासी हिमालको काखमा स्याउ बगैँचा १३ मिनेट पहिले
बाँकेमा कोरोना बिरामीका लागि शय्या अभाव १४ मिनेट पहिले
चितवनमा कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु २३ मिनेट पहिले
वेटरदेखि होटल मालिकसम्म बनेका कृष्ण २७ मिनेट पहिले
नेपाल समूहभित्रै विवादः नयाँ दल गठन गर्ने कि नगर्ने ? २८ मिनेट पहिले
नेप्सेमा रिलायन्स फाइनान्सको शेयरमूल्य समायोजन ३४ मिनेट पहिले
प्राइम कमर्सियल बैंकको ऋणपत्र बाँडफाँड २ हप्ता पहिले
कपिलवस्तुमा बस र ट्रक ठोक्किँदा चालकको मृत्यु, २४ जना घाइते ३ दिन पहिले
अमुवा बजारमा ज्योति विकास बैंकले बाँड्याे ५० भन्दा धेरै क्युआर कोड ४ हप्ता पहिले
सबैतिर ढकमक्क फुले सयपत्री, तिहारमा फूलको कुनै कमी नहुने ६ महिना पहिले
आईसीसी विश्वकप क्रिकेट : स्टोक्स चम्किदाँ इंग्ल्याण्डको विजयी सुरुवात २ वर्ष पहिले
सिटी एक्सप्रेस ग्रुपलाई प्रधानमन्त्रीद्धारा सम्मान २ वर्ष पहिले
बालबच्चाको पोषणबारे सचेत बन्दैछन् आमाहरु ६ महिना पहिले